I-Sonos Yembule Ikhithi Ebuyisela Ibhethri yeSonos Move | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | | Izipikha, Izinsimbi
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uhlobo lomculo oludumile iSonos selwethule okuthile okwenze wonke amakhasimende alo ajabula kakhulu, amanye Amakethi ebhethri abuyisela izipikha ezivelele ze-Sonos Move. Kuyikhithi elula ukuyifaka futhi ezoxazulula khona manjalo izinkinga zebhethri esingaziphatha. Lokhu akujwayelekile ngokujwayelekile ngezipikha ezingenantambo, kepha esimweni seSonos intengo yayo ayijwayelekile. Ngakho-ke labo abatshala imali yabo bazokwazisa ukukwazi ukwandisa impilo yedivayisi yabo.
Le khithi ifaka konke okudingayo ukufaka esikhundleni sebhethri ngaphandle kwesidingo samanye amathuluzi angeziwe, ngakho-ke noma ngubani uzokwazi ukukwenza ngaphandle kwenkinga. Ephaketheni sithola okuthile okufana kakhulu nokukhethwa kwesigingci esingaphakamisa ngaso ikhava evikelayo, uhlobo lwe-T oluzosisiza sikhiphe isikulufu, izikulufo ezimbili zokulondoloza futhi ngokunengqondo ibhethri elinomthamo ofanayo nowasekuqaleni.
Ibhethri lokwelula impilo yeSonos Move yethu
USonos ukhiphe le khithi yokufaka esikhundleni se- € 79 futhi iyatholakala ngemibala efanayo abayinikeza iSomos Move speaker speaker. Kuwebhusayithi yakho isikhulu sizobona yonke ikhathalogi yakho lapho ibhokisi lokufaka esikhundleni sebhethri selivele linamathiselwe khona. Qaphela ukuthi ukuthunyelwa kwaleli khithi lokufaka esikhundleni kukhululekile ngokuphelele esitolo salo esisemthethweni. Ukubaluleka kwalezi zindaba kukhulu kakhulu, ngoba kube nabasebenzisi abaningi abathi ibhethri libona ukonakala okwehlele lowo wangaphakathi, into eyenzeka kuwo wonke amadivayisi, ikakhulukazi kuma-smartphones.
Ibhethri inezincazelo ezifanayo ncamashi nezasekuqaleni, ngokuzimela okungu-11h okuzoncika kakhulu kuvolumu, izinga lokushisa noma ibanga ledivayisi ekhipha, ngaphandle kwezindaba ezinhle kakhulu. Uma ufuna ukubona ukuhlaziywa kwethu okujulile kwe-Sonos Move, chofoza kulesi sixhumanisi, lapho sasihlola kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » Izinsimbi » USonos wethule ikhithi ezongena esikhundleni sebhethri yeSonos Move